Isbitaalka Magaalada Cagaaran oo yeeshay Qalab Shaybaar oo dhammaystiran(Sawiro). | Raadreeb
Isbitaalka Magaalada Cagaaran oo yeeshay Qalab Shaybaar oo dhammaystiran(Sawiro).
Isbitaalka Magaallada Cagaaran oo ka tirsan Gobolka Mudug ayaa waxaa lagasiiyey, Qalab Shaybaar iyo dawooyin) qalabkan waxaas isbitaalka ugu deeqay Gabdho degan Norway.
Cisbitaalka Magaallada Cagaaran ee Gobolka Mudug ayaa yeeshay markii ugu horaysay Qalab Shaybaar oo casriya Qalabkan ayaa waxaa Isbitaalka soo garsiiyey Gabdho! u dhaqdhaqaqa hormarinta Gobolka Mudug gar ahana Deegaanka Cagaaran.
Caasha Cabdillahi Daafeed, oo looyaqaan (Samiiro) oo hormuud ka ahayd keenista Qalabkan ayaa sheegtay inay daddaal dheer kadib ku guuleysteen Qalab shaybaar oo dhamaystiran inay keenaan Cisbitaalka Cagaaran ee Gobolka Mudug qalabka ayaa wuxuu ka koban yahay dhammaan qalabkii lagu baari lahaa bukanada u bahda shaybaar, waxaa kale oo weheliyey qalabka Dawooyin badan oo loogu tala galay Isbitaalka Cagaaran, qeybtiisa dhallaanka iyo Hooyada.
Magaallada Cagaaran oo kamida Magaalooyinka hoos taga Degmada Gaalkacayo ayaan horay u lahayn Shaybaar), noocaan oo kala waxaana bulshadu dhib weyn ku qaban dhanka barista cudurada kala duwan, waxayna u’ aadi jireen Gaalkacayo oo 30,mitir u jirta Cagaaran.
Bulshada Deegaanka Cagaaran ayaa baahi weyn u qabay inay helan Qalab Shaybaar oo Magaalladu yelato, keenista Qalabkan ayaa wuxuu dabbooli doona baahidii dhanka Baarista iyo cudurada, waxaana ka faa’iideysan doona bulshada Cagaaran iyo deegaanada hoos yimaada.
Cagaaran oo kamida Magaallooyinka wayadan dambe aadka u dhismay ayaa waxaa kajirtay baahida qalabkan hada ay keeneen Haweenka Deegaanka Cagaaran ee dagan Waddanka Norway.
Isbitaalka manta Qalabkan lakeenay ayaa waxaa horay dayac tir xooggan kusameyey Isla Haweenka Qurba jogta ee kasoo jeeda Gobolka Mudug gar ahan (Cagaaran), waxaana hada la dhamaystiray Qeyb kamida Isbitaalka},Cagaaran Siday noo xaqiijisay Caasha Cabdullahi Daafeed, oo horseed u ahayd qalabeynta iyo dib u dayac tirka Isbitaalka Cagaaran.
Guddoomiyaha Deegaanka Cagaaran Deeq Aadan Abshir) ayaa aad uga mahadceliyey Hablihii keenay Qalabkan wuxuuna bulshada kula dardarmay inay ilaalsadan xallabka Shaybaarka oo ah mid baahi weyn u qabeen bulshada deegaanku.
Guddoomiyaha Cagaaran, Deeq Aadan Abshir ayaa wuxuu intaas ku daray inay bulshada Cagaaran kadhabaysaty dardarankii Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamad Cali (Gaas) ee ku ‘aadana in bulshadu isku tashato, wuxuuna intaas raciyey in bulshada Gobolka Mudug iyo guud ahan-baa Puntland ay kadhabeyan isku tashiga iyo is kaashiga dhanka hormarka iyo isku tiirsannanta.
Agaasimaha Isbitaalka Cagaaran Digtoor Siciid Qararac ayaa siweyn ugu mahadceliyey Haweenka Qurba jogta ee Qallabkan Keenay kuna caawiyey bulshadooda, wuxuuna intas ku daray in Cagaran ay heshay xili aay baahi weyn u qabtay Qallab Shaybaar, oo casiriya.
Ugu dambayntiina Maamulka Deegaanka Cagaaran iyo dhakhaatiirta Deegaanka Cagaaran ayaa sheegay in Magaallada Cagaaran ay hada aad ugu soo guuran dadka Abaaraha kasoo guuray ee Galbeedka Gobolka Mudug iyo dhanka Bari ee Gobollka Doollo ee Dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya.